lundi, 03 septembre 2018 22:33
Vokatry ny krizy toe-tsaina: Zaza menavava telo mianadahy no nisy nanary
Zazalahy kely vao teraka mbola miaraka amin’ny tadim-poitra no nisy nanary teo amoron-dalana tao Ambohipeno, Kaominina Amparafaravola ny faran’ny herinandro teo.
Nahohoka ilay zaza sady nototofana fasika. Nisy feon-jaza mitomany ao anatiny henon’ny olona saingy somary vahotra ny manodidina ny hivoaka noho ny tsy fandriam-pahalemana.
Maro no nihevitra fa fandrika ataon’ny jiolahy io ka dia samy namitsaka tany an-tranony avy ny rehetra. Renim-pianakaviana iray sendra nandalo ny ampitso maraina no nahatsikaritra io zaza io ka nitondra azy avy hatrany tany amin’ny tobim-pahasalamana.
lundi, 03 septembre 2018 22:31
Jean Ravelonarivo: Nitsapa ny halalin’ny rano teto Tolagnaro
Tonga nifanakalo hevitra sy nampahafantatra ny vina sy asa laharampahamehana hotanterahiny ny jeneraly Jean Ravelonarivo, kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy.
Teo amin'ny kianja fanaovam-baolina Ampasamasay ny fihaonana. Nampanantena ny Jean Ravelonarivo fa haverina amin'ny laonina ny fandriampahalemana, hamafisina ny ady amin'ny kolikoly ... mba tsy ho anisan'ny firenena gisitra sy mahantra intsony i Madagasikara.
Hiazo an’Androy indray ny kandida sy ny mpiara-dia aminy taorian’i Tolagnaro.
lundi, 03 septembre 2018 15:53
BEPC Antsirabe: Nizotra am-pilaminana
Tsy araka ny niheverana azy sy ny fitaitainan’ny Ray aman-dreny, fa mizotra amim-pilaminana ny fanadinam-panjakana BEPC raha ny teto Antsirabe. Tsy nisy ny olana, ary na nitombo aza ny isan’ny mpiadina dia nanodidina ny 6% teo ny tsy tonga.
Misy mpiadina voasoratra anarana miisa 23.471 manerana an’i Vakinankaratra, mitsinjara amin’ireo foibem-panandinana miisa 77 anatin’ny fari-pididiam-pampianarana na Cisco miisa 7.
9 taona no zandriny indrindra amin’ireo kandida izay mpianatry ny Sainte Thérèse Mahazoarivo, raha toa ka 51 taona no zokiny indrindra.
Ho an’ny foibem-panadinana Lycée André Resampa manokana, izay nisy toeram-panadinana 3, dia ny tao amin’ny St Joseph sy ny Immaculée ary ny tao amin’ny Lisea dia 4.445 no mpiadina, ka ny 656 no tsy tonga tamin’ireo.
Mahanoro: Mpampianatra hanao “jury” BEPC maty tampoka
Tran’aretina tampoka Razafimahery Jean Marie, mpampianatra ao amin’ny Lycée Mahanoro, androany tokony ho tamin’ny 6ora sy fahefany maraina.
Nifamonjena nentina namonjy hopitaly izy, saingy tsy tana ny ainy na dia nanao izay ho afany aza ny mpitsabo.
Sendikan’ny Administratera Sivily: Hanao fihaonambe aty Morondava
Hotanterahina aty an-drenivohitry ny faritra Menabe ny 21 sy 22 septambra ho avy io ny fihaonambe nasionalin’ny sendikan’ny Administratera sivily eto Madagasikara (SYNAD). Handray anjara amin’io na ireo amperinasa na ireo Administratera efa misotro ronono.
Antsirabe: Fanamboaran-dalana kitoatoa
Mampiteny ny moana ary mahabe resaka ny maro mpampiasa lalana ny fomba nanamboarana ilay lalana nolazaina fa nahazo famatsiam-bola avy tamin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina.
lundi, 03 septembre 2018 15:23
Morondava: Mpampianatra “Jury” BEPC maty nisy namono
May vokatry ny “court-circuit” ny tranony teo Tanambao rehefa niverina tampoka ny jiro teto Morondava ny harivan’ny alahady 2 septambra. Levon’ny afo, tsy nisy azo noraisina ny entana tao an-trano. Sarotra ny namonoana afo satria tsy zakan’ny tetezana miampita eny ny fiaran’ny mpamonjy voina tokony hiazo teny.
Nisy namono ny alin’io nahamaizan’ny trano nitoerany io ihany, ilay renim-pianakaviana tompontrano izay Mpampianatra ao amin’ny CEG Centre Morondava ary isan’ireo mpiambina amin’ny fanadinana BEPC manomboka androany maraina, manerana ny Nosy.
Misokatra ny fanadihadiana, hikarohana ireo nahavanon-doza ka hamantarana ny anton’izao vono olona izao.
lundi, 03 septembre 2018 15:22
Soahazo - Toliara Il: Very tany ampamonjena “Savatsy” ny basin’ilay miaramila
Tao Betsioky, Kaominina Soahazo, Distrikan’i Toliara Il no nitrangan’ity raharaha ity. Hamonjy hasoavana (Savatsy) no nahatongavan’ilay miaramila tao, ny faran’ny herinandro teo. Tsy hamita iraka fa hamonjy fety. Very nandritra izany ny basiny, izay kalachnikov.
Nifampitadiavana ilay basy ary dia tao anaty herisetra no nanaovana izany. Nitsoaka tany anaty ala ny mponina tao sy ny manodidina fa izay tratra mahazo vono, novakin’ireo mpikaroka kosa ny trano tsy nisy olona.
Hita ihany moa ilay basy, nisy namerina azy tany amin’ny EPP ary dia efa milamina ny tanàna amin’izao.
lundi, 03 septembre 2018 09:29
Ntsay Christian: Cesser toute manœuvre visant à compromettre la tenue de l’élection présidentielle
C’est à Ranomafana, District d’Ifanadiana, Région Vatovavy Fitovinany que le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ntsay Christian a pris part à l’ouverture officielle de la journée internationale de la décentralisation et du développement local, placé sous le thème: “Lutte contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l’Afrique à partir de ses territoires”.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a affirmé que si depuis 2015, on a fixé le cadre légal définissant les stratégies à adopter pour la lutte contre la corruption, actuellement, on constate que cette dernière prend encore plus d'ampleur dans la vie quotidienne des Malagasy, surtout au niveau des forces de l’ordre, au recrutement des fonctionnaires et dans le domaine de la justice.
lundi, 03 septembre 2018 09:10
Sambava: Raikitra ny BEPC
Tao anatin’ny filaminana ny BEPC, izay nanomboka androany, raha ny teto Sambava tamin’ny Centre Andamoty.
Nanomboka tamin’ny 8ora ny fizarana ny laza adina voaloany, dia ny taranja Malagasy izany.
8 138 ny voasoratra anarana ato amin’ny Cisco Sambava fa 24 011 kosa ato amin’ny DREN SAVA. Andrasana ny isan'ireo izay tonga niatrika.
Toetr’andro dia tonga mitsitapitapy ny orana izao maraina izao.